Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Hirshabeelle ku qanciyey ka qaybgalka shirka Muqdisho. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Hirshabeelle ku qanciyey ka qaybgalka shirka Muqdisho.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulan ay yeesheen Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha maamulka Galmudug Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen.
Kulanka oo ahaa mid la doonayay in lagu qanciyo Madaxweynaha Hir-Sbabeelle oo diidanaa ka qeyb galka Shirka Golaha wadatashiga doorashooyinka ayaa wararka soo baxay ay sheegayaan in Ra’iisul Wasaare Rooble uu ka raalli galiyay tabashadii uu ka qabay ka qeyb galka Shirka Golaha Wadatashiga Qaran, isla markaana uu qanciyay.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud-laawe ayaa lagu qanciyey inuu shirka kaga qaybgalo aaladda Fogaan aragga ee ZOOM-ka isagoo ku sugan magaalada Istaanbuul ee wadanka Turkiga, halkaasi oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa.
War qoraal ah oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ayaa horay loogu sheegay in Madaxweyne Cali Guudlaawe ka qeyb galeyn Shirka, isla markaana wixii kasoo baxa aysan aqbaleyn Hir-Shabeelle.